guul Archives - HalQaran.com
Cayaartoyda kubadda Cagta ee Hayland oo lagu soo dhaweeyay Muqdisho +(SAWIRO)
HalQaran Staff - August 29, 2021
Muqdisho (Halqaran.com) - Cayaartooyda kubada cagta ee ka timid Haayland ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta soo gaaray garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. Waxaana...
Ilhaan Cumar oo markale ku guuleysatay doorashadii ka dhacday Mareykanka
Minnesota (Halqaran.com) - Xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa xalay ku guuleysatay doorashadii gelinkii dambe ee Talaadadii ka dhacday Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Ilhaan Cumar ayaa...
XOG: ”Nin 5 taliye, labo sano iyo bar ku beddelay Al-Shabaab dagaal kulama jiro ee dantiisa maxay noqon kartaa”! waxa sidaasi yiri…
HalQaran Staff - August 26, 2019
Muqdisho (Halqaran.com) - Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa markale weerar afka ah ku qaaday Madaxweynaha dowladda Federaalka ah Soomaaliya, Maxamed Cabdilaahi Maxamed (Farmaajo), oo...
DAAWO VIDEO: Nuxurka Khudbaddii Axmed Madoobe, kaddib guushiisa ee Doorashada Jubbaland (Maxaase kaaga baxay?)!
Weriye Ahmed Abdi - August 23, 2019
HalQaran Staff - August 22, 2019
Kismaayo (Halqaran.com) - Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa Khamiistii maanta markii 3-aad loo doortay inuu hoggaamiyo Maamulka Jubbaland, ka dib markii uu helay...